Misy rehareha ao amin'ny App Store amin'ny vidiny 0,99 euro | Vaovao IPhone
Misy rehareha ao amin'ny App Store amin'ny vidiny 0,99 Euros fotsiny
Raha miresaka momba ny famokarana ao amin'ny App Store isika dia afaka mahita rindranasa marobe izay hanampy antsika isan'andro, indrindra raha manana zavatra maro ao an-tsaina matetika isika ary manoratra ny zava-drehetra tanteraka ka tsy misy mahazo antsika. Proud dia tonga tao amin'ny App Store miaraka amin'ny hevitra hanome fiodin-kevitra amin'ny rafi-drafitra nentim-paharazana, ny sasany amin'izy ireo dia lany andro. Ny Proud dia ahafahantsika mifehy tsara kokoa ny fotoanantsika hahafahana manatanteraka ny asa rehetra sy / na ny fampahatsiahivana izay efa niandrasana sy noho ny hery lehibe sasany, araka ny niantsoan'izy ireo azy hoe: Omeo fotoana bebe kokoa aho, afaho amin'ny adin-tsaina ary miverena ara-potoana.
Proud dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 4,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao izany latsaky ny iray euro, 0,99 euro. Raha reraka amin'ny fampiharana mahazatra anao hitantanana isan'andro isan'andro ianao dia fotoana mety izao hanomezana an'ity fampiharana tsara ity vintana manome ireto manaraka ireto.
Fifanarahana tsotra sy miorina amin'ny fihetsika, mba hahafahanao miroso haingana kokoa amin'ilay fampiharana
Fanemorana asa tsotra: "Amin'ny alina" fa tsy "amin'ny 7 hariva"
Fahazarana hahafahanao mitsahatra tsy manadino ireo zava-dehibe!
Fandrindrana Dropbox mba hahafahanao mahomby kokoa amin'ny fitaovanao iOS rehetra (sy Mac beta)
Multitasking ho an'ny iPad
TouchID hitandrina ny asanao
Mifantoha / Mialà sasatra ny timer hampahatsiahivana anao fa hiala sasatra rehefa miasa ianao
Hery matanjaka 3: "Omeo fotoana betsaka aho", "Mandehana miverina amin'ny fotoana mahamety", ary "Afaho amin'ny fihenjanana aho"
Lohahevitra 24 miloko hanaovana ny Proud amin'ny fomba itiavanao azy
Fampiharana Apple Watch izay miasa na dia tsy eo akaiky eo aza ny iPhone-nao
Ahintsano mba hanondranana sy hanonta ireo lisitrao, mba hahafahanao mizara izany amin'ny hafa
Ny tanjonao amin'ny fiainana, ny hampatsiahy anao ny zava-dehibe amin'ny fiainanao
Tabilao 7 andro amin'ny zava-bitanao mba hahitanao ny isan'ny asa vitanao
Ahintsano ny hanafoanana / hanavao, mba tsy hanahy ianao rehefa mikorontana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Misy rehareha ao amin'ny App Store amin'ny vidiny 0,99 Euros fotsiny
Alberto Carranza sary placeholder dia hoy izy:
Tena tsara hanombohana amin'ny 2017 amin'ny tongotra ankavanana 😉 Miarahaba anao Nacho!
Valiny tamin'i Alberto Carranza
José Manuel dia hoy izy:
Ratsy, fa ratsy ratsy. Misy an-jatony afaka ary manome azy fihodinana arivo.
Valiny tamin'i José Manuel
ForceInPicture dia tweak maimaim-poana izay mampihetsika ny asan'ny Picture In Picture amin'ny iPhone sy iPod
Ireo harona na kitapo misy vintana avy any Japon dia nidina teo amin'ny tantara